तपाई कुन दिशातर्फ सिरानी लाएर सुत्नु हुन्छ ? बिज्ञान भन्छ “यी दिशामा सिरानी लगाएर सुत्ने मानिषको जीवनमा अशान्ति र बुद्दि नाश हुन्छ” – Jagaran Nepal
०३ माघ २०७७, शनिबार
तपाई कुन दिशातर्फ सिरानी लाएर सुत्नु हुन्छ ? बिज्ञान भन्छ “यी दिशामा सिरानी लगाएर सुत्ने मानिषको जीवनमा अशान्ति र बुद्दि नाश हुन्छ”
Jagaran Nepal आइतबार, जेठ ३२, २०७७
काठमाडौँ । सुत्नका लागि उपयुक्त दिशामा शिरानी हुन जरुरी छ । वायुमण्डलका उर्जाका नकारात्मक किरण शरीरमा प्रवेश गर्दा जीवनमा नकारत्मक प्रभाव पर्ने भएका कारण उर्जा कम गर्नका लागि वास्तुको विशेष महत्व भएको वास्तुशास्त्रमा उल्लेख छ। गृहस्वामीको मुख्य शयनकक्ष घरको दक्षिण या पश्चिम दिशामा हुनुपर्छ।
पृथ्वीको दक्षिणमा ध्रुव र शिरको रूपमा मनुष्यको उत्तरी ध्रुवले ऊर्जाको एउटा धारा पूर्ण पार्छ।
त्यसैप्रकार पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव र मनुष्यको खुट्टाको दक्षिणी ध्रुवले पनि उर्जाको अर्को धारालाई पूर्ण पार्छ र चुम्बकीय तरङ्गको प्रवेशमा बाधा उत्पन्न हुँदैन। त्यस्तो हुने भएकाले सुतेको मानिसलाई शान्ति एवं गहिरो निन्द्रा लाग्छ। यसबाट राम्रो बुद्धिको विकास हुन्छ र साथै घरमा पनि सुख-समृद्धि एवं सम्पन्नता हुने गर्छ।यदि दक्षिण दिशामा शिरानी राख्न सम्भव हुँदैन भने पश्चिमतर्फ राख्न सकिन्छ।
अन्य दिशामा पलङ्ग र शिरानी राख्नाले बुद्धि सञ्चालन ठीकसँग हुन पाउँदैन।सुत्नको लागि पूर्व सबैभन्दा राम्रो हो । उत्तर पूर्व पनि सुत्न सकिन्छ। पश्चिम राम्रो मानिन्छ । दक्षिण पनि राम्रो नै हुन्छ। तपाई पृथ्वीको उत्तरी गोलाद्र्धमा हुनुहुन्छ भने उत्तर बाहेकको सबै दिशामा सुत्नु राम्रो हो । तर दक्षिणी गोलाद्धमा बसोबास गर्नेका लागि भने दक्षिण शिरानी गर्नुहुँदैन।
एक साहसी आमा: जसले आफ्नो चार महिने छोरी बचाउन यस्तो भ’यानक अवस्थाको सामना गरिन्
यि हुन इतिहासकै क्रू’र तानाशाह
सासलाई रोक्दा वा सास फेर्ने दर कम भएकामा कोभिडको सङ्क्रमण हुने सम्भावना बढी
२० महिनाकी यि बालिकाले ५ जनालाई नयाँ जीवन दिएर गरिन् मृ’ त्यु वरण, यस्तो दुखद कहानी सुन्ने सबैका आँखा रसाए
७ लाख पैसा र छोरीसहित अर्कै परपुरुषसँग भागेकी श्रीमतीलाई ३ बर्षपछि यस्तो अवस्थामा फेला पारे पुर्व प्रहरी हवल्दार सुवासले (भिडियो)
आमा सम्झिदै रुुन्छन्, यी नानीबाबुहरु (भिडियोसहित)
यती कलिला दम्पत्तीको यस्तो धन्दा
ममी तिमी आफ्नो ख्याल गर है भन्दै सम्झाएका १७ छोराको बारेमा सुधारकेन्द्रवाट आयो मृत्युको खबर, आमा मुर्छित (भिडियो हेर्नुस्)
बुहारीसँग लगातार ४ बर्षसम्म स’म्बन्ध ब’नाएको अभियोगमा ससुरा पक्राउ
त्रिभुवन विमानस्थलमा २ हेलिकप्टर रहस्यमय, अहिले चालक दल नै छोडेरै गायब भएपछि हंगामा
परेवाका कारण ९० वटा सम्बन्ध विच्छेद
लकडाउन अवधिको घरभाडा छुट पाउने कि नपाउने ? सर्वोच्चले यस्ताे भन्याे